करनको चामत्कारिक ब्याटिङ, बन्लान् त गेम चेन्जर ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
करनको चामत्कारिक ब्याटिङ, बन्लान् त गेम चेन्जर ?
डिसी नेपाल , २ फाल्गुन २०७४
काठमाडौँ। आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु अन्तर्गत नेपालको अन्तिम खेलमा हार स्वीकार्ने पक्षमा देखिदैनन् करन केसी । क्यानाडाका लागि सहज जित अनुमान गरिएको यो खेलमा करन केसी गेम चेन्जर बन्ने प्रयासमा छन् ।
आश मारिसकेको खेलमा करनका छक्का, चौकले झिनो आश अझै जिवत गराएको छ ।
७ बल बाँकी रहँदा नेपालका लागि ९ रन चाहिएको छ ।
नेपालको ९ विकेट गुमेको छ । अब मात्र एक विकेट खातामा छ ।
नेपालको जित्ने आशा अब करिव समाप्त जस्तै देखिएको बेला करन आशा बनेर मैदानमा डटेका छन् । करनले ३ छक्का, २ चौका प्रहार गरेका छन् ।
करन केसीको चामत्कारिक ब्याटिङले नेपालको सनसनीपूर्ण जित
काठमाडौँ। आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु अन्तर्गत नेपालको अन्तिम खेलमा नेपालका लागि १ विकेटको सनसनीपूर्ण जित हात परेको छ । यो जितका लागि करन केसी हिरो सावित भए । जितको आश मारिसकेको खेल लयमा फर्काएर चामत्कारिक जित दिएका करन गेम चन्जर बने ।
खेल यतिसम्म सनसनीपूर्ण बन्यो कि अन्तिम १ बलमा १ रन चाहिएको थियो । स्वास रोकेर दर्शकले नतिजा कुर्नु परेको यो क्षण नेपालका लागि खुसीको वहार बन्यो ।
करन केसीले नटआउट ४२ रन जोडेका हुन्, जम्मा ३१ बलको सहारामा । जुन नेपालको जितका लागि मुख्य कारक बन्यो । उनले ४ छक्का र ४ चौका हानेर जित दिलाएका हुन् ।
नेपालले १९५ को लक्ष्य पाएको थियो । शून्य बल शेष राख्दै नेपालले रोमान्चक लक्ष्य पूरा गरेको हो ।
यो जितसँग नेपालले अर्को महिना हुने वान डे क्वालिफायरका लागि आफ्नो सहभागिता सुरक्षित गरेको छ ।